सुत्केरी महिलाको मृत्युलाई लिएर दुईपक्ष विच विवाद | Sima Post
सुत्केरी महिलाको मृत्युलाई लिएर दुईपक्ष विच विवाद
२५ आश्विन २०७७, आईतवार
करेन्ट लागेर नभई कुटपिट गरि हत्या भएको माईती पक्षको आरोप
जिल्लामा एक चारमहिनाकी सुत्केरी महिलाको मृत्युलाई लिएर दुईपक्ष विच विवाद उत्पन्न भएको छ । कलैया उपमहानगरपालिका–१२ बलिरामपुर स्थीत राधेचन्द्र यादवकी पत्नी २५ बर्षिया पुष्पा देवीको हत्या भएको माईती पक्षले आरोप लगाएपछी विवाद भएको हो । यता बारा प्रहरीले शनिबार साँझ करेन्ट लागेर धारामा ढलेकी पुष्पाको कलैया अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको जनाएको छ । धारामा मोटर चलाउन जडान भएको विजुली सर्टभई करेन्ट लाग्दा उनको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई छ ।
तर मृतक महिलाका माइती पक्षले करेन्ट लागेर मृत्यु नभई उनको हत्या भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले केटापक्षले आफ्नी चेलीलाई कुटपिट गरि हत्या गरेको हुनसक्ने भन्दै कलैया अस्पतालबाट आईतबार अवेर सम्म शव बुझ्न दिएनन् ।
कलैया उपमहानगरपालिका २६ निवासी पुष्पाको राधेचन्द्रसँग विवाह भएको ५ बर्ष भयो । विवाह भएको एकबर्षपछी देखी नै पैसाका विषयलाई लिएर राधेचन्द्र ससुरालीसँग रिसाएका थिए । त्यसपछी पुष्पालाई माईती घर आउजाउ बन्द गरे । आफनतसँग भेट्न, बोल्न बन्द भयो । भाई बहिनीहरु र स्वयं आमाबुवासँग कुरा गर्न र भेटगर्न राधेचन्द्रको परिवारले पुष्पालाई बन्देज लगायो । त्यो बन्देज अहिने सम्म जारी थियो ।
पुष्पाका लागि चाडपर्व माईती टाडा बनाईएको थियो, मृतक पुष्पाका आफन्त राजेश कुस्वाहले बताए । केही दिनअघि विदेशबाट आएका पुष्पाका भाईले मात्रै जसोतसो दिदिसँग भेट गरेका थिए । त्यसको केहीदिन नवित्दै उनको मृत्युको खबर आयो । हाम्रालागि यो खब स्वभाविक लाग्ने कुरा कसरी हुन्छ राजेशले सुनाए । घटनाको गहिरो अध्यायन र निश्पक्ष छानविन गरी दोषीलाई कार्वाही गर्नु पर्ने हाम्रो माग हो, उनले भने।
करेन्ट लागेरै पुष्पाको मृत्यु भएको घरपक्षको भनाई
यता करेन्ट लागेरै पुष्पाको मृत्यु भएको घरपक्षको भनाई छ । शनिवार बेलुका धारामा जडित मोटर चलाउने क्रममा करेन्ट लागि लडेकी रहिछन् । मैलेनै एम्बुलेन्स बोलाएर अस्पताल पठाएको हुँ, विडम्बना उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा उनको बाटोमा निधन भयो । जहाँ सम्म मृतक पुष्पाका माईती पक्षले मारेको आरोप लगाए त्यो सरासर निराधार भएको वडा नं.१२ का अध्यक्ष राजन राउत कुर्मीले बताए ।
३ बर्ष पहिलो पहिलो सन्तान हुँदा उनी माईतमा थिईन् । गर्भमै दिशा खाएको अवस्थामा अपाङ्ग बच्चा जन्मियो । उपचारका धेरै खर्च गर्दागर्दै केही समयपछी त्यो बच्चा म¥यो । सुसुराली पक्षको लापवाहिले बच्चा गुमाउनु परेको भन्ने केटापक्षलाई परेको भएपनि पछिल्लो समय दुवै परिवार विच सम्बन्ध सुमधुर रहेको आफुले बुझेको उनले बताए ।
यद्यपी बुहारीलाई असाध्यै माया गर्थे । अहिले पनि उनीहरुको ४ महिनाको छोरा छ । पति कमाउन काठमाण्डौं बस्थे । घटनापछी आज आएका छन् । हामी छिमेकी पनि हौं । पुष्पाको हत्या भयो भनेर पत्याउने कुनै आधार छैन । यो दुर्घटना हो वडाअध्यक्ष कुर्मीले भने ।
तर माईती पक्ष सोमान्ने पक्षमा नदेखिँदा शनिबार दिनभर कलैया अस्पताल परिषर विवादित बन्यो । कलैया नगरपालिका मेयर राजेश राय यादव सहितका जनप्रतिनिधीहरु र प्रहरी विवाद ब्यवस्थापनमा लगेका थिए । साँझ अबेर वास्तविकताको गहिरो छानविन गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिने र पोष्टमाटम रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्ने दुईपक्ष विच सहमती भएको छ । सहमतीपछी शव केटापक्षलाई बुझाईको छलफलमा संलग्न कलैया उपमहानगरपालिका ८का अध्यक्ष विक्रम यादवले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रहरी कार्याल बाराका प्रहरी नायव उपरिक्षक गौतम् मिश्रले जाहेरी परेका खण्डमा प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्ने छ । त्यसका लागि पोष्टमाटम रिपोट आएपछि मात्रै केही भन्न सकिने उने बताए । वास्तवमै घटना सुनियोजित पाईको खण्डमा संलग्नलाई कडा कार्वाहीको दायरामा ल्याईने उनको भनाई छ ।
यो पनि पढ्नुहोला !
पाकिस्तानसङग विश्वशान्तिको लागि राष्ट्रिय एकता अभियानको अपिल
पाराडाईज होटल सिमराका संचालक सहित १० जुवाडे पक्राउ
मुम्बई २६/११ आतन्की हमलाको विरोधमा मोटरसाइकल रैली
झारफुक गर्ने बहानामा एक युवतीको बलात्कार
परिवर्तनका लागि युवाको नेतृत्व अपरिहार्य ः उपसभापति झा
सामाजिक अगुवा खतिवडाको निधन, एकदिन कार्यालय बन्द हुने
टोल स्तरीय क्रिकेट टुर्नामेटमा बलुवा टिम विजय
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
9 hours अफिले
12 hours अफिले
भ्रष्टचारको ग्राफ बढदै, नियन्त्रण आवश्यक – विद्यार्थी यादव
17 hours अफिले
राजकुमार गुप्ता चौरसिया हत्याको मुख्य योजनाकार नरहेको खुलासा, गुप्तालाई अदालत बाट क्लिन चिट
21 hours अफिले
सिरहाको लाहानमा एक महिलाको संकास्पद मृत्यु
24 hours अफिले
लहान नगरपालिका-१२, सिरहा
प्रकाशक:- मुकेश कुमार यादव
प्रधान सम्पादक:- देव कुमार यादव
सम्पादक:- सुरेश कुमार यादव
सम्पर्क नं.:- +९७७-९८६२९९९५५४
न्युज डेस्क:- लाल बिहारी यादव
सम्पर्क नं.:- +९७७-९८०४७०५८३६
© Sima Post || All right Reserved || Design By Surendra Singh